MOFT Kiisaska oo u taagan iPhone iyo MacBook | IPhone News
louis padilla | 27/04/2022 11:34 | Qalabka IPhone, dhowr
Waxaan ku tijaabinay qalabyada MOFT ee iPhone iyo MacBook, oo kor u kaca Marka lagu daro in ay na siiso taageero si aan u isticmaalno qalabkeena si raaxo leh, waxay leeyihiin hawlo kale sida kuwa haysta kaadhka, daboolaya ama si fudud "aan la arki karin".
1 qalab gaar ah
2 Haysta kaadhka iyo haysta iPhone
3 Taallada aan muuqan ee MacBook
4 MacBook Case & Istaag
MOFT waxay na siisaa qalabyo ka duwan taageerooyinka caadiga ah. Haa, waxay noo soo bandhigaan suurtogalnimada in aan iPhone-keena miiska saarno si aan u aragno shaashadda si raaxo leh, ama waxay kor u qaadaan dhererka MacBookga marka lagu daro in ay geliyaan keyboard-ka meel raaxo leh oo wax lagu qoro. Laakin marka laga soo tago hawlahan ay taageero kasta oo kale oo caadi ahi ina siin karto, waxay leeyihiin wax gaar ah oo iyaga ka dhigaya kuwo gaar ah.
Dhammaan alaabooyinkooda waxay ka samaysan yihiin maqaarka synthetic oo tayo sare leh. Taabashada waa mid aad u jilicsan, wayna adagtahay in la kala saaro maqaarka dhabta ah. Waa badeecooyin la tijaabiyay in ay iska caabiyaan waxayna muujinaysaa marka ugu horeysa ee aad gacmahaaga ku taabato. Aad bay u adkaysanayaan, aad bay uga badan yihiin haddii ay tahay maqaarka dhabta ah, mana haystaan ​​muuqaalkaas caagga ah oo raqiis ah oo maqaar ku dayasho ahi u janjeerto. Go'aanka ah in aan la isticmaalin maqaar dhab ah maaha in la badbaadiyo lacag, laakiin halkii laga samayn lahaa alaab aad u ixtiraam badan dabeecadda iyo adkaysi u leh, oo u adkeysan kara isticmaalka maalinlaha ah iyada oo aan wax dhibaato ah.
In ay designoo isku darka magnets-ka iyo laalaabka nooca "origami". si loo gaaro saldhig xasiloon oo kuu ogolaanaya inaad haysato qalabkaaga adigoon ruxin ama dhaqdhaqaaqyo kale oo aan raaxo lahayn markaad isticmaaleyso. Falanqayntan waxaan ku tijaabinay saddex qalab oo kala duwan: taageero birlab ah oo loogu talagalay iPhone oo sidoo kale ah kaadhka haysta; istaag dherer lagu hagaajin karo oo aan la arki karin MacBookga; sleeve MacBook ah oo isu beddela istaag dherer lagu hagaajin karo.
Haysta kaadhka iyo haysta iPhone
La jaan qaada nidaamka MagSafe ee iPhone 12 iyo 13, Kaarka maqaar ee vegan-ka haysta wuxuu si magnetically ah ugu dhejiyaa iPhone kaaga Waxayna sidaas samaynaysaa iyadoo ka faa'iidaysanaysa labada magnet ee nidaamka MagSafe, midda wareegta ah ee xajinta weyn iyo kan hoose si looga hortago inuu si sahal ah u leexdo. Qabashada magnetic waa waxa aad ka filan lahayd nidaamka MagSafe, waa ku filan tahay in aanu hoos u dhicin marka la isticmaalayo, laakiin way fududahay in la saaro. Qabashadu waxay si fiican ugu shaqeysaa kiis MagSafe ah, maadaama muraayadda dambe ee iPhone ay aad u liidato. Taasi waxay tidhi, haddii aad isticmaashay qalab MagSafe ah, dhaqanka kaadhkan haysta waa isku mid.
Waxaa laga heli karaa dhowr midab, sawiradan midka aad arki karto waa midabka buluuga ah ee Oxford. Qoraal kuwa Isticmaalayaasha iPhone 13 Pro: Iyadoo loo eegayo cabbirka iPhone iyo moduleka kamaradda, Dabaysha Buluugga ah / Qaawan ee Qaanuunka ah / Qorrax dhaca Orange / Hello kuwa haysta kaadhka jaalaha ah ayaa ugu fiican maadaama kaadhadhka kale ee haystaa ay xoogaa ka weyn yihiin oo moduleka kamaradu uu ka dhigayo in aanay si fiican ugu habboonayn. Haddii aad leedahay iPhone 13 Pro Max, maadaama uu ka weyn yahay, dhib malahan.
Qofka haysta kaadhku waxa uu boos u haystaa saddex kaadh oo credit card ama aqoonsiga kaadhka aqoonsiga, kuwaas oo si buuxda u qarsoon marka aanu laalaabin. Gelida iyo soo saaristooda aad bay u fududahay, iyo Marka ay ku jiraan gudaha kiiska kaadhka, ma jiraan wax la dareemi karo kororka dhumucda. Sidii aan horeyba u sheegay, kuma dhacayso markaad geliso oo ka soo baxdo jeebkaada, laakiin shakhsi ahaan waxaan u isticmaalaa si badbaado leh oo lagu daro daboolka MagSafe, qabsashada ayaa ka fiican.
Shaqada taageerada waa inaan laalaabnaa kaadhka haystaha kaas oo ku sii jiri doona qaabkaas iyada oo ay ugu wacan tahay isticmaalka caqliga leh ee magnets, oo muujinaya kaararka aan ku darnay. Waxaan u dhigi karnaa iPhone-kayaga si toos ah, ama u wareejin karnaa taageerada oo aan u dhigno si siman si aan ugu raaxaysanno nuxurka warbaahinta ama u isticmaal shirarka fiidiyowga. Waxa taagan waa mid aad u xasilloon oo ma jirto khatar ah in iPhone si fudud u dhici karo.
Taallada aan muuqan ee MacBook
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ugu jecelahay ee ku saabsan isticmaalka laptop-ka marka aad socoto waa qaabka kiiboodhka oo si buuxda toosan. caadaystay isticmaalka kiiboodhka oo leh heer go'an oo u janjeedhsanaan ah, maan helin sida si buuxda loogu qoro saacado siman. Taageerada MOFT waxay halkan u joogtaa inay wax ka bedesho sababtoo ah gabi ahaanba lagama dareemo salka laptop-kaaga, saldhiggani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u leexiso laptop-kaaga laba boos oo go'an, 15 ama 25 digrii, tanina ma aha oo kaliya in ay kor u qaaddo shaashadda meel aad u raaxaysan oo indhahaaga iyo qoorta ah, laakiin sidoo kale waxay u janjeertaa kumbuyuutarka si aad u daabacdo raaxo leh.
Fikradda aad bay u xariifsan tahay: xaashi maqaar ah oo vegan ah oo ku dheggan saldhigga laptop-kaaga, oo dhumucdiisu yar tahay oo aanad xitaa ogaan doonin inaad xidhatay. Xabagta la isticmaalo ayaa u oggolaanaysa in la isticmaalo inta jeer ee loo baahdo, iyada oo aan wax hadhaaga ah kaga tagin laptop-kaaga marka aad iska saarto. Isticmaalka waa mid aad u fudud, oo waxaad ku furfuraysaa dhowr ilbiriqsi gudahood, sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala doorato labada xaglood ee u janjeersiga.. Taageero ahaan waa mid aad u xasilloon, waxaad awoodi doontaa inaad taageerto gacmahaaga oo aad qorto adigoon dareemin nooc kasta oo gariir ah ama ruxaya saldhigga, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in fiberglass loo isticmaalo qaab dhismeedkiisa.
Marka aadan u baahnayn waxaad si buuxda u illoobi doontaa inaad xidhatay, waxaadna sii wadan kartaa isticmaalka kiiskii aad haysato, sababtoo ah wax dhumuc ah ayay ku kordhinaysaa laptop-kaaga. Waxay ku habboon tahay laptops ilaa 15,6 ", in kasta oo aan ku tijaabiyey MacBook Pro 16" oo uu si fiican u shaqeeyo.. Sawirada aad arkayso iyo fiidyowga ku jira waxaan isticmaalay MacBookga, kaas oo aan gabi ahaanba aan la aqbali karin. Haddii ay qancisay xaaskayga oo markii hore aad uga shakisanayd, waxaan idiin xaqiijinayaa inay dhammaan idin qancin doonto. Waxaa lagu heli karaa midabyo badan, miyir leh sida madow ama cawl, dhalaalaya sida orange ama casaan, iyo qaar kale oo badan.
MacBook Case & Istaag
Waxa aan uga tagay qalabkii aan jeclaa ee saddexdaa ugu dambeeyay: gacan-gacmeedka MacBook Pro 16 ″ kaas oo sidoo kale u shaqeeya sidii istaag-lagu hagaajin karo. Alaabtani waxay xallisaa dhibaatooyin badan marka istaroog ku dhaco. Dhinaca kale, waa kiis aad u fiican oo taabasho aad u wanaagsan leh si aan u awoodo inaan qaado laptop-kayga meel kasta oo ka baxsan boorsadayda. Waxa kale oo ay ii ogolaataa in aan kor u qaado muraayadda laptop-ka si aan qoortu u dhibin markaad isticmaalayso miiska dushiisa saacado badan waxayna ii ogolaataa inaan si raaxo leh wax u qoro. Oo haddii aanay tani ku filnayn, waxay haysataa meel bannaan oo ay ku qaado charger-ga iyo fiilada, iyo sidoo kale kaadhka haystaha oo had iyo jeer ku habboon.
Daboolka ayaa laga heli karaa midabyo kala duwan iyo laba cabbir. Midka 14-inch waxa loogu talagalay 13 iyo 14-inch MacBook, halka 14-ka mid ah uu yahay, marka loo eego qeexitaanka bogga rasmiga ah, ee moodooyinka 15 ″. Waxaan ku tijaabiyay MacBookga 16 ″ (2021) wuuna ku habboon yahay dhibaato la'aan, cadaalad ah laakiin si fiican ugu habboon. Waxay leedahay jeebka gudaha si ay u geliso daareeyaha laptop-ka iyo fiilada, taas oo si fiican ugu habboon iyada oo ay ugu wacan tahay qaybta laastikada ee daboolka. Kaarka yar ee gudaha ku haysta wuxuu leeyahay boos kaarka deynta ama aqoonsiga shaqada.
Taageero ahaan waxay kuu ogolaanaysaa laba boos, oo leh u janjeera 15 iyo 25º. Waa inaan qiraa in si qurux badan aan u jeclahay habka taageerada "aan la arki karin" ee kor ku xusan ay u muuqato mid ka sii fiican, laakiin tani Waxay u qabataa shaqada si la mid ah sidoo kale, aad u deggan oo ay fududahay in la laalaabiyo oo la furo. Haddii aan ku darno shaqadeeda dabool ahaan, markaa aniga waxay ii tahay qalabka ugu fiican ee laptop-kayga.
MOFT waxay na siisaa saddex taageero oo ka duwan kuwa kale. Iyada oo leh walxo synthetic ah oo u muuqda oo dareemaya mid aad ugu eg maqaarka oo leh dhamaystir heer sare ah., Haysta MagSafe iPhone, haystaha Laptop-ka ee aan muuqan iyo gacan-gacmeedka Laptop-ka ayaa ku habboon had iyo jeer in aad hesho taageeradaas marka aad guriga ka maqan tahay. Waxaad ka heli kartaa bogga rasmiga ah ee MOFT:
Haysta kaadhka-MagSafe taageerada iPhone ee €28 (isku xirka)
Laptopka aan la arki karin wuxuu taagan yahay €23 (isku xirka)
14 ama 16 ″ gacan-gacmeedka gacanta-laptop-ka ah €50 (isku xirka)
MOFT taageero iPhone iyo MacBook
Ku dhejiyay: 27 April 2022
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 27 April 2022
Istaashiyo xasiloon oo la qaadi karo
shaqada kaadhka haysta
Taageerada MagSafe ee iPhone 13 ee moodooyinka qaar ayaa farageliya moduleka kamarada
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Qalabka ugu fiican ee alaabtaada Apple
Podcast 13x29: Kani waa Cupertino iyo wararka kale ee usbuuca